1933 Boho Style Downtown Studio eduze kwe-Beweries - I-Airbnb
1933 Boho Style Downtown Studio eduze kwe-Beweries
Tulsa, Oklahoma, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Ryan
I-loft enhle ye-Boho 1933 enamasevisi abuyekeziwe. Leli yunithi lilungiswe ngokuphelele futhi lihlanganisa i-porcelain shower, amatafula e-granite, amakhabethe amasha, amafasitela amasha, izindawo zaphansi ze-porcelain kuyo yonke indlu yokugezela nekhishi. Kukhona i-40" 4K TV ne-Netflix ukuze kube lula kuwe. Isendaweni ephakathi nanoma yiziphi izenzakalo zasedolobheni. Sisondelene nezindawo ezenza utshwala ezihamba phambili e-Tulsa okuhlanganisa i-Dead Armadillo ngakwesokudla, i-Nothings Left, i-CabinBoys Brewery, i-American Solera, i-Pearl Beach Club.
Iyunithi ibuyekezwe ngokuphelele, ngakho ngeke ibe nomuzwa wokuthi uhlala esakhiweni sika-1933. Konke kulungisiwe, kusukela ku-porcelain shower surround kanye nezinto eziphezulu zensimbi engagqwali kuya ku-granite kanye nompompi wabapheki. Sagcina izindawo zaphansi zasekuqaleni futhi sazilungisa. Kukhona uhla lwegesi lensimbi engagqwali kanye nohhavini kanye nesiqandisi sensimbi engagqwali esinamanzi ahlungiwe neqhwa. Kukhona futhi i-TV engu-40" 4K ene-Netflix. Isendaweni ephakathi eduze ne-Dead Armadillo ngaphandle nje kwedolobha lase-Eastvillage lapho ungajabulela khona i-Bohemian Pizza, i-Lowoods, i-Hodges Bend, i-The Goats. Ungaphakathi kwamamayela angu-6 ezindawo zokwenza utshwala kuhlanganise ne-. I-American Solera, i-Cabin Imper Brewery, i-Nothings Left, i-Welltown, i-Pearl Beach Brewery ne-Heirloom Rustic Ales. Kukhona umculo obukhoma ngoLwesine, ngoLwesihlanu nangeMigqibelo. Ngakho sicela uqaphele ukuthi kunomsindo othile phakathi nalezo zikhathi. I-loft yangasese ngokuphelele yango-1933. Yisakhiwo esidala esinezinhlamvu eziningi esivuselela njalo futhi sithuthukisa ukuze samukele izivakashi zethu. Kunesikhala esiluhlaza ngemuva kwesakhiwo esinokukhanya okusha okunezela esimweni sendawo. Sitholakala ngokuqondile phambi komzila omangalisayo, ngakho-ke ungahamba nje noma uhambe ngezinyawo futhi uhlole izindawo eziningi i-Tulsa enazo. Izokuyisa epaki leminyaka (ephakathi) futhi ungahamba ngqo ku-6th st lapho ungabamba khona isidlo sasekuseni sase-Bramble noma ikhofi e-Cirque. Siphinde siseduze nesifunda se-dome eluhlaza okwesibhakabhaka lapho ungajabulela khona ubusuku ngaphandle ngempelasonto ngemigoqo eminingi efana ne-Fassler, isitsha se-Dust, i-det retro pub lapho ungajabulela khona imidlalo eminingi ye-arcade futhi uphuze ubhiya noma ngisho ne-Hotel Indigos rooftop terrace bar ne-Cherry St. Siphinde siseduze ne-OneOK lapho ungabamba khona umdlalo we-baseball noma umdlalo webhola. I-Main st esifundeni sase-Brady yilapho ungajabulela khona i-brunch, isidlo sasemini, ikhofi kanye nobhiya konke ngaphakathi kokuvimba komunye nomunye. I-Tulsa inokuningi ongakunikeza ngakho sithemba ukuthi uyakujabulela ukuhlala kwakho. Uma usazisa izinto ozithandayo singatusa ezinye izenzakalo, noma imisebenzi engakhanga kuwe, siyakuthanda ukwenza izivakashi zethu zifanelane nawe. Sithemba ukuthi uyayijabulela i-Tulsa, OK
4.53 out of 5 stars from 90 reviews
4.53 · 90 okushiwo abanye
- 550 amamitha ukusuka East Village
- Ngaphansi kwengxenye yemayela ukusuka esifundeni saseBlue Dome
- Ngaphansi kwemayela ukusuka eBOK, Cains Ballroom, Brady Theatre, Guthrie Green & OneOK Field
- 1 Mile kusuka eCherry St khetha ezindaweni ezingama-25+: amabha, izitolo zekhofi, nezindawo zokudlela ezinhle
Eduze neWoodward Park (1.5 Miles)
- Eduze Nendawo entsha Yokubuthela (2.0 Miles)
Eduze nase-Utica Square (2.0 Miles)
Eduze nePhilbrook Museum of Art (2.0 Miles)
Eduze neTulsa Fair Grounds (3.0 Miles)
Eduze naseBrookside (3.0 miles)
- Ukufinyelela eduze komgwaqo omkhulu kusho ukuthi noma iyiphi ingxenye ye-Tulsa ayisekho ngaphezu kwemizuzu eyi-15 yokushayela
- Indawo ephilayo
I love to travel and meet new people. Experiencing new environments and delicious foods are some of my favorite things to do
Siyajabula ukukwamukela ukuhlala kwakho e-The Herbold futhi singakunikeza noma yiziphi izicelo ezikhethekile zokugcina ukuhlala kwezinkanyezi ezi-5, ungesabi ukubuza. Singancoma izindawo zokudlela eziseduze, imicimbi nezindawo
Hlola ezinye izinketho ezise- Tulsa namaphethelo